Arra’a ammoo Toronto tti “Jawar is small Gaddafi” jatte Nafxanyaan!! - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosArra’a ammoo Toronto tti “Jawar is small Gaddafi” jatte Nafxanyaan!!
Mootummaa Oromo fi Oromia Jawar Mohammed qoricha budaa Oromo CanadaToronto galatoomaa
Jawar Mohammed Speaking in Toronto
Arra’a ammoo Toronto tti “Jawar is small Gaddafi” jatte Nafxanyaan.
Qooy jara kana jalaa warri Liibiyaalleen nagaya hin bahuu?
Tibbana maqaan shamarran Oromoo hedduun baafatanii fi hedduu jaallatan ‘Caaltuun’ miidiyaa hawaasummaarratti ajandaa ijoo ta’eera.
Xiinxalaan siyaasaa Oromoo gameessi Jawar Mohammed wayita mariidhaaf gara Kaaba Ameerikaatti imletti gareen isaan morman mormii isaanii dhageessisuu irra darbanii maqaa namoota waamuun arrabsaa turan.
Kanneen arrabsoo kanaaf saaxilaman keessaa Aadde Chaltu Siraj tokko.
Isaan waan ishee “arrabsan” itti fakkaate ‘Caaltuu… Caaltuu…’ jechuun itti iyyan viidiyoodhaan waraabamee miidiyaa hawwaasummaarra naanna’aa tureera.
Caaltuu Siraaj garuu suura irratti waan arrabsamaa jirtu hin fakkaanne. Faara gammachuutiin kokkolfaa alaabaa qabsoo Oromoo qoleerratti uffattee fuuldura galma walga’iishee qofa ilaalaa ‘danboobaa’ bira dabarte.
Miiraa mo’annaa Caaltuun ittiin wacaafi arrabsoo garee warra ishee mormanii gidduu ittiin dabarte namoonni ilaalanis hojiin isheefi maqaan ishee walgita jechuun yaada isaanii kennaniiru.
BBC Afaan Oromoo waan ishee mudatee iyyaafateera.